Umama wekhadibhodi emnyama yeHalloween | Imisebenzi yezandla
UMaria Jose Roldan | | Imisebenzi yezandla, Imisebenzi yeHalloween, Imisebenzi yezandla zabantwana, Izihlandlo ezikhethekileyo
Le mveliso ilungele iHalloween kunye nokwenza nabantwana ngenxa yokuba ilula kangakanani. Yinto yobugcisa enezinto ezimbalwa kwaye iya kujongeka intle xa igqityiwe. Yinto yobugcisa enokuthi ibekwe ngabantwana kumagumbi abo okulala ubusuku oboyikisayo okanye ihombise ikhaya ngalo. Ngaba ukulungele ukuyenza?
Ukuba abantwana bangaphezulu kweminyaka emi-6 ubudala bangayenza ngokuzimeleyo, kodwa ukuba bancinci, kungcono ukuba ube secaleni kwabo ukongamela lo msebenzi kwaye ubathintele ukuba bangazenzakalisi ngesikere. Kuya kufuneka wenze i-mummy template ngokwakho ukuze bayinqumle.
1 Zeziphi izinto oza kuzifuna
2 Uyenza njani ubugcisa
Zeziphi izinto oza kuzifuna
Ikhadi elimnyama eli-1
Intambo emhlophe okanye uboya obumhlophe
Uyenza njani ubugcisa
Kuqala kwinto zonke kuya kufuneka uzobe isithunzi somama, njengoko ubona emfanekisweni. Nje ukuba unayo kuya kufuneka uyisike. Xa usikekile, thatha umsonto omhlophe okanye intambo kwaye ubeke isiphelo esinye emva kwentloko kamama ukuze ukwazi ukuyinxiba ngenzondelelo.
Nje ukuba ilungiswe ngenzondelelo, qala ukungqonga i-mummy ngentambo emhlophe njengoko ubona kwimifanekiso ide ibe "ngummified". Nje ukuba unayo yonke intambo, thatha amehlo ashukumayo kwaye uwancamathisele ebusweni bomama.
Xa sele ilungile ngokupheleleyo, uya kuba nakho ukonwabela obu bugcisa bulula ukuhombisa ekhaya. Ukuba ngumkhwa olula kangaka, ngezixhobo eziyimfuneko kunokwenziwa nabantwana abaninzi ngaxeshanye, kuba banokuncedana ngokubukela ukuba yenziwa njani.
Yinto elula kakhulu ukuyonwabela ipati yeHalloween! Ngokuqinisekileyo kubonakala kukuhle kuwe!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Imisebenzi yezandla » Imisebenzi yezandla » Umama wekhadibhodi emnyama yeHalloween
Umama olula weHalloween wokwenza nabantwana